के आर्यन निराश छन् ? « Mazzako Online
के आर्यन निराश छन् ?
अभिनेता आर्यन सिग्देल केही निराश देखिएका छन् । आर्यनको निराशाको कारण फिल्म ‘क्लासिक’ हुनसक्छ । आर्यनले यो फिल्ममा खुबै मिहिनेत गरेका थिए । आर्यनले फिल्मका लागि अन्य ब्यानरका फिल्म पनि खेलेनन् । यसैको प्रचारमा दौडधुप गरे । फिल्म चल्यो पनि । आर्यनको अभिनयको तारिफ पनि भयो ।
तर, फिल्म अन्य २ फिल्मसँग जुध्दा ठूलो नाफामा जान सकेन । जसकाकारण, बर्षभरि मिहिनेत गरेर काम गरेको फिल्म राम्रो चल्दा चल्दै पनि राम्रो कमाई हुन नसक्दा आर्यन निराश बनेका हुन् । किनकी, यो फिल्ममा उनको पनि लगानी छ ।
‘आर्यनको नयाँ प्रोजेक्ट के छ त ?’ उनले आफूलाई फिल्म खेल्न नै मन नलागेको बताए । यतिसम्म कि, अब फिल्म क्षेत्रमा नयाँ अभिनेता आएकाले पनि आफ्नो अभाव नहुने भनाई उनको थियो ।
धेरै फिल्महरु राम्रो चलेर पनि आफ्नै फिल्मसँग जुध्दा निर्मातालाई सन्तुष्ट हुनेगरि पैसा कमाउन सक्दैनन् । ‘क्लासिक’ चल्यो, लगानी पनि उठायो । तर, निर्माता समेत रहेका आर्यन फिल्म जुधेका कारण जती कमाउनुपथ्र्यो, त्यती कमाउन नसकिएको बताउँछन् ।